ကလေးဒေသ၌ မိုးရက်ဆက် ရွာသွန်းနေမှုကြောင့် မွေးမြူရေး ပျားပုံး ထောင်ချီ၍ မိုးနည်းသည့် ဒေသသို?? - Yangon Media Group
ကလေး၊ ဇွန် ၆
စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး ကလေးဒေသ၌ မေလဆန်းမှစတင်၍ မိုးအဆက်မပြတ် ရွာသွန်းမှုကြောင့် ဆောင်းဝင်ရာသီမှစတင်ကာ ကလေးဒေသသို့ ရောက်ရှိနေခဲ့သည့် မွေးမြူရေးပျား ပုံးအရေအတွက် ထောင်ချီကို မိုးနည်းပါးရာဒေသသို့ ပြောင်းရွှေ့နေပြီဖြစ်ကြောင်း ကလေးမြို့ဒေသခံပျားမွေးမြူရေးသမား ဦးကျော်ဌေးက ဇွန် ၅ ရက်တွင် ပြောကြားသည်။
ကလေးဒေသသည် ဆောင်းရာသီကာလတစ်လျှောက်လုံး မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မှ ပျားမွေးမြူရေးသမားများ လာရောက်အခြေချ၍ ပျားမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင် ရာဒေသဖြစ်ပြီး ကလေးဒေသတွင် ပျားမွေးမြူရေးအတွက် ပျားစာဖြစ် သော တောပန်းတောင်ပန်း၊ ပန်းမျိုးစုံနှင့် ဆောင်းနေကြာစိုက်ပျိုးမှုကြီးမားစွာရှိနေသည့် ဒေသဖြစ်သည်။ ”ကလေးဒေသဟာ ပျားမွေးမြူ သူတွေအတွက်၊ ပျားပုံးချသူတွေ အတွက် အကောင်းဆုံးနေရာတစ် ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဘက်မှာ ပျားစာပေါတယ်။ ရာသီဥတု ကောင်းတယ်ဆို တော့ ပျားရည်အထွက်နှုန်းကောင်းတယ်။ ပြီးတော့ နေကြာပျားရည်က ဈေးကောင်းရပြီး နိုင်ငံတကာ အကြိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက် အရောင်းသွက်တယ်”ဟု ကလေးမြို့နယ် ပျားမွေးမြူရေးဦးစီးဌာန ဦးစီးမှူး ဒေါက်တာကျော်ကျော်ဦးက ပြောကြားသည်။
ကလေးဒေသတွင် ဆောင်းဝင် ရာသီမှစတင်၍ စစ်ကိုင်း၊ ကသာ၊ အင်းတော်၊ ဘုတလင်၊ ကနီဒေသ များမှ ပျားပုံးပေါင်း ၁၁ဝဝဝကျော် လာရောက်မွေးမြူကြခြင်းဖြစ်ပြီး ယခုအခါ ကလေးဒေသတွင် မိုးရွာသွန်းမှုရက်ဆက်ဖြစ်လာခြင်း၊ ရာသီဥတုပုံမှန်မရှိတော့ခြင်းနှင့် မြစ်ရေ၊ ချောင်းရေများတက်လာ ခြင်းတို့ကောင့် မြစ်သာမြစ်ရိုးတစ် လျှောက်ချထားသည့် ပျားပုံးများ၊ နေရဉ္စရာချောင်းရိုးတစ်လျှောက် ရှိ ပျားပုံးများနှင့် ကလေး-ဂန့်ဂေါ ရထားလမ်းတစ်လျှောက်တွင် ချထားသည့် ပျားပုံးများထောင်ချီ ပြောင်းရွှေ့နေခြင်းဖြစ်သည်။ ယခုရက်ပိုင်း ကလေးဒေသထွက် ပျားရည်များကို တရုတ်၊ ဂျပန်၊ စင်ကာပူ ကုမ္ပဏီတို့မှ ဝယ် ယူနေကြပြီး ကလေးဒေသထွက် နေကြာပျားရည်တစ်ပိဿာ ကျပ် ၃ဝဝဝ ဈေးရှိကြောင်း သိရသည်။
စစ်တောင်း စက္ကူစက်ရုံဟောင်းပိုင် စိုက်ခင်းမြေနေရာကို ၎င်းစက်ရုံအနီး ပတ်ဝန်းကျင် ကျေးရွာသူ၊ ကေ
ပြည်သူနှင့် မကင်းကွာရေး ကြိုးပမ်းနေဟု ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် အောက်မေ့ဖွယ် အခမ်းအနားတွင် ရန်ကု??
ကုလအချက်အလက်ရှာဖွေရေးမစ်ရှင်၏ အစီရင်ခံစာကို မျိုးချစ်ဆိုသူတို့ ကန့်ကွက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်